Tsy misy intsony i Motorola fa "Moto by Lenovo" | Androidsis
Nodimandry i Motorola ka lasa "Moto by Lenovo"
Azontsika atao izao manao veloma orinasa iray fa misy ifandraisany akaiky amin'ny telefaona finday izany ary ny walkie talkies dia nampiasain'ny mpiray dina tamin'ny Ady Lehibe Faharoa, tsy misy na inona na inona. Orinasa iray izay niverina tamin'ny fahefany miaraka amin'ny Motorola Droid ary tao anatin'izay telo taona lasa izay dia nanome ny zava-drehetra hitondra terminal izay efa nekena tokoa, na dia tamin'ny andiany farany aza dia somary nihoatra ny fetra azon'izy ireo ekena izy ireo, ary na dia ny vidiny ho an'ny inona ny taranaka voalohany Moto X sy Moto G. Hatramin'ny nandalo teny an-tanan'i Google, dia i Lenovo ihany no nividy azy tamin'ny farany ka androany dia manana vaovao mangidy isika momba izay marika teo amin'ity tontolon'ny telefaona ity.
Hatramin'ny CES 2016 tany Las Vegas dia nanambara i Lenovo fa ny orinasany, izay manana Motorola hatramin'ny 2014, dia ho misintona ny anarana marika hanaovana azy "Moto by Lenovo". Ny anarana Motorola dia hiaina ho fizarana orinasa ao anatin'ny tabilao fandaminan'ny mpanamboatra sinoa, ary ny marika famantarana Motorola dia mbola hampiasaina amin'ny fitaovana. Ny marika Moto dia hitohy hihazona ireo fitaovana avo lenta ireo, na dia homena marika "Moto avy amin'i Lenovo" aza izy ireo. Motorola dia hampiasa ilay andian-dahatsoratra na anarana hoe "Vibe" ho an'ny fitaovana ambany na fidirana, izay ho tonga any amin'ny firenena toa an'i Etazonia, toerana niavian'io Motorola io izay tsy misy intsony.
1 Lenovo mifehy
2 Moto avy amin'i Lenovo
Ity vaovao tsy midika hoe hanjavona ny tsipika Moto, saingy eny fa ireo finday avo lenta ireo, na dia hanohy ny fahatongavany miaraka amin'ny fanontana vaovao aza izy ireo dia hanana ny sary famantarana sy ny marika Lenovo amin'ny tsirairay amin'izy ireo. Azo antoka fa tsy dia mitaona firy izany, fa iza no mahalala, tsy maintsy ho hitantsika ny fivoarany fa i Lenovo no marika famantarana ary Motorola izay mitazona foana ny fahatsapana sasany dia nanjavona tao amin'ilay fampitahana. Heverina fa ho an'ny besinimaro amerikana, mifamatotra bebe kokoa amin'ity marika anaovany azy ity, dia hahita amin'ny tsy fahitana ny fanjavonan'ny sariny manokana ho eo am-pelatanan'ny marika iray hafa, zavatra iray izay efa niseho tamin'ny taona 2014 fa ankehitriny dia naseho tanteraka.
Ny hevitra fototra dia ny fanirian'ny marika Lenovo ny marika Motorola. Marika iray na dia nianjera tamin'ny ady tamin'i Samsung sy Apple, mbola manana mpiorina mpankafy azy izay miloka aminy foana izy. Lenovo kosa dia marika tsy dia fantatra loatra amin'ny indostrian'ny telefaona finday. Tsy misy na inona na inona holazaina momba ny maha-zava-dehibe azy amin'ny solosaina, fa rehefa apetraka amin'ny finday avo lenta izy io dia manana entity lehibe kokoa i Motorola raha ampitahaina. Ny tanjon'izy ireo, rehefa nividy ilay orinasa tamin'ny Google izy ireo, dia ny hampisondrotra ny fisiany eo amin'ny tsenan'ny finday.
Moto avy amin'i Lenovo
Lenovo dia hitazona ny andiany Moto tahaka ny hitohizanao ny fivarotana ny anao safidy hafa mora vidy toy io tsipika Vibe io. Manantena ity mpanamboatra sinoa ity amin'ity hetsika ity hampifandray ny marika miaraka amin'ny Motorola mba hanombohana ny varotra ny terminal-n'ny terminal ary hitarika ny marika hamantatra fa hanampy azy hivarotra bebe kokoa ary ho lasa mpilalao lehibe amin'ity sehatra ity.
Ankehitriny dia hijanona izany jereo ny mpanjifa raha hanohy miloka izy ireo ho an'ireo terminal izay hisehoan'i Lenovo ankehitriny amin'ny maha-zava-baovao azy. Ireo fitaovana dia hanohy hamolavola azy ireo, saingy amin'ny anarana mifandraika amin'ireo fantsona izay hiova ho marika iray izay hanjavona mandrakizay. Ity môtô ity sy ny fanamboarana azy dia hijanona ho fahatsiarovana ilay Motorola, ka ny filokana ataon'ity mpanamboatra sinoa ity ihany no jerena. Efa fantatsika ny fomba fiasan'ny sarambabem-bahoaka ary ny hetsika tahaka izao dia mety hiteraka fiovana tampoka amin'ny fomba fahitany zavatra, izay lasa mahazo fitaovana na tsia.
Una olana ho an'ireo mpampiasa rehetra ireo Amerikanina izay natoky an'i Motorola taona maro izao ary hahita ny tenany fa miatrika fiovana miharihary. Miankina amin'izy ireo izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Lenovo » Nodimandry i Motorola ka lasa "Moto by Lenovo"
Ny marina dia satria ny motorola V dia mbola tsy naheno tamin'izy ireo intsony .. Manantena aho fa hiverina amin'ny fomban-drazany izy ireo, mila fifaninanana isika fa ny vidiny dia ao anaty tafon-trano ..
Ny smartphone Google sy Lenovo an'ny Project Tango voalohany miaraka amin'ny scanner 3D dia latsaky ny 500 $
Mampinono i Facebook: mpampiasa 800 tapitrisa mahery no mampiasa ny fampiharana azy